घरभित्रै अपराध बढ्दै, परिवारकै सदस्यबाट खतरा - नेपालबहस
घरभित्रै अपराध बढ्दै, परिवारकै सदस्यबाट खतरा
२८ साउन, घोडाघोडी । केही वर्षयता कैलालीमा आपराधिक घटना बढ्दै गएका छन् । त्यसमा पनि घरपरिवारका सदस्यबाट हुने अपराधका घटनामा वृद्धि भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एक वर्षको अवधिमा अंशवण्डा, मादक पदार्थ सेवन र रिसको आवेगमा आएर आफ्नै परिवारका सदस्यको हत्या गर्ने क्रम बढेको कैलाली प्रहरीले बताएको छ ।
पछिल्लो समय लागुऔषध प्रयोग तथा ओसारपसारमा महिलाको संग्लग्नता बढ्दै गइरहेको कैलाली प्रहरी प्रमुख गिरीले दाबी गरे । लागुऔषधको दलदलमा फसेका युवतीले नै देहव्यापारदेखि अन्य किसिमका अपराधका घटना बढाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । यसको नियन्त्रणका लागि सुरक्षा रणनीति मजबुत बनाइएको उनको दाबी छ ।
आव २०७४/७५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा दर्ता भएका ७१ लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा १०८ जनालाई प्रक्राउ गरिएकामा आव २०७५/७६ मा दर्ता भएका ८७ मुद्दामा ११७ लाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरी प्रमुख गिरीले बताउनुभयो । चालू आव २०७६/७७ को साउन १३ गतेसम्म लागुऔषधसम्बन्धी परेका पाँच मुद्दामा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाश मिश्रको सहयोगमा
अघिल्लो लेखपशुपति क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन सुझाव
अर्को लेखबाढीले ८८ जनाको मृत्यु, ४० बेपत्ता
सिरहाबाट लागुऔषधसहित तीन जना पक्राउ
विप्लब सेक्रेटरीविरुद्ध एनसेल टावर आगजनीको आरोप
पण्डित ज्यू, विवाह गराउदै हुनुहुन्छ ? कारवाहीमा पर्नुहोला पहिला नागरिकता हेर्नुस !
विप्लव समूहका १६ कार्यकर्ता पक्राउ
प्रहरी बुलेटिन : ब्राउनसुगरसहित तीन पक्राउ
भारतबाट अवैध रुपमा ल्याएका २१ भैसी नियन्त्रणमा